Muuziqaa - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 5:21 23 Onkololeessa 20215:21 23 Onkololeessa 2021
Waa'ee nageenyaa fi mirga daa'imman Somaaliyaa, wa'ee Joorji Filooyid akkasumas waa'ee artiist Haacaaluu Hundeessaa wallisuu hima. Addunyaa kam keessattuu namni yoo miidhamu cal jechuu hin danda'u jedha Kibroom Barihuu ykn 'Q. Rap'.
...tti maxxanfame 11:56 9 Onkololeessa 202111:56 9 Onkololeessa 2021
Weellisaan beekamaa The Weekend ambaasaaddara Sagantaa Nyaata Addunyaa tahe
Sagantaan Nyaata Addunyaa- WFP weellisaa beekamaa Abeel Tasfaayee sanyii Itoophiyaa qabu ambaasaaddara tola-ooltummaa gochuun muude.
...tti maxxanfame 5:28 9 Onkololeessa 20215:28 9 Onkololeessa 2021
Fayaa Dayi - filmii beekamaan Afaan Oromoo Jaasikaa Bashir kan abbaashee Oromoofi haadhashee lammii Meeksiikoo irraa dhalatteen hojjatamee, ilaalchisuun akkasiin isiniif qindeessineera, dubbiifadhaa.
...tti maxxanfame 5:28 19 Fuulbaana 20215:28 19 Fuulbaana 2021
Waggoota 45 oliif aartiidhaan qabsaa'aa kan ture Weellisaa Zarihun Wadaajoo amma dhibamee sireerraa jira. Seenaasaa gabaabsinee akkaanaan qixeessineerra.
...tti maxxanfame 8:51 14 Fuulbaana 20218:51 14 Fuulbaana 2021
Sirbi qeenxee weellisaa Taarikuu Gaankaasii, Dishtaa Giinaa ykn Addaam Wondimmee jedhu YouTube gubbaatti erga gadhiifame kaasee haga ammaa si'a miiliyoona 19 ilaalameera.
...tti maxxanfame 7:51 10 Fuulbaana 20217:51 10 Fuulbaana 2021
'Shinooyyee weeddisaan guddadhe, aadaa kana beeksisuufan sirba hojjedhe'
Finfinnee mana barumsaa Aaskoo sadarkaa lammaffaatti arsiistuu kan taate Wellistuu Meetii Hayilee, sirbaa fi barsiisummaan ogummaa lamaan walfaana hojjetti.
...tti maxxanfame 4:25 7 Fuulbaana 20214:25 7 Fuulbaana 2021
Nuhoo Goobanaa, weellisaa umrii guutuu tokkummaa Oromoo lallabe
Nuhoo Goobanaa weellistoota Oromoo angafa muuziqaa seena qabeessa weellisuun maqaan ka'u keessaa tokko. Nutis gabaasa keenya har'aatiin seenaa gabaabaa weellisaa gameessa kanaa akkasiin qindeessineerra.
...tti maxxanfame 9:47 3 Fuulbaana 20219:47 3 Fuulbaana 2021
Weellisaa muuziqaa ammayyaa beekamaa Alamaayyoo Isheetee eenyu?
Aartistii gameessi Alamaayyoo Isheetee dhukkubbii onnee isaan mudateen Fulbaana 02, 2021 du'aan boqataniiru. Weellisaa Alamaayyoo Isheetee dhimmi muuziqaawwan ammayyaa Itoophiyaa wayita ka'utti, aartistoota maqaansaanii adda duraan ka'u keessaa tokko.
...tti maxxanfame 10:36 30 Hagayya 202110:36 30 Hagayya 2021
Weellisaa Eebbisaa Addunyaa guyyaa 25n har'aa ajjeefame, harmeensaa mucaankoo seenaasaa malee homaa hin qabu jechuun waggaa lama dura BBCtti himanii ture. Bal'ina isaa dubbisaa.
...tti maxxanfame 4:36 28 Hagayya 20214:36 28 Hagayya 2021
'Walaloo kutaa saditti eegalee hanga sirboota 320 ol barreessuutti'
Sirboota 320 caalaniif walaloo fi yeedaloo gumaachuu kan himu barreessaan walaloo fi ogeessi yeedaloo gameessi Oromoo Simee Tufaa walaloo barreessuu fi dubbisuu kutaa sadirraa akka eegale BBCtti hima.
Page 1 Keessaa 11